Ntughari Udo | Onye ọrụ ubi na-elekọta anụ ọhịa | February 2020
Atiya Ntughari Udo
Nzuzo nke ihe ndi ozo na-eme nke tuberose n'ubi
Ọ bụghị ndị niile na-elekọta ubi maara ihe tuberose bụ. Ulo a di nma nke oma n'ime iri ogugu nke iri na abuo na ugbua o di ugbua n'inwe obi uto na onodu nke onu ulo. Tuberose na Grik pụtara "akwa ifuru". Maka ahihia siri ike, a na-akpọ osisi a "eze nke aromas." Osisi a na-ekpo ọkụ na-esiri ike itolite na mbara ala na ọnọdụ ihu igwe anyị.
Nzuzo nke na-eto eto yucca
A na-ahụkarị osisi na-acha uhie uhie na-acha uhie uhie na-acha na-acha akwụkwọ ndụ-acha akwụkwọ ndụ akwụkwọ ndụ na-eto eto site na mgbidi mgbidi. A na-adọta mmasị dị ukwuu site na ụzụ ndị na-adịghị ahụkebe nke dị n'akụkụ ọnụ nke epupụta, na nnukwu ụda dị n'ụdị panicle na-acha ọcha ọcha.
Ihe niile ị chọrọ ịma maka na-eto eto
Gelenium nwere otutu njirimara. Osisi a bụ onye nnọchianya nke ezinụlọ Compositae a chọtara ya na omenala kemgbe 1635. Otú ọ dị, a kọwara mbụ ifuru ahụ n'ọrụ Karl Linnaeus na 1755. Osisi nile nke umu a nwere ike inwe oke ohia di iche, ma dabere na di iche iche, ya di iche site na 30 ruo 150 cm.
Ụdị na iche nke ị ga
A na-eji nlezianya perennial stevia na-eji tumadi na nhazi ihuenyo. Ọ na-eto ogologo oge, nọgide na-achọ mma ruo n'oge mgbụsị akwụkwọ. Nlekọta ahụ adịghị mma, ọ dịghị achọ ndị na-elekọta ya, ọ na-enwekwa ike ịmasị ọbụna onye na-ese fureji na agba. Nsogbu nke osisi ahụ na-etolite nanị n'etiti ndị nerds, ndị na-adịghị ekpebisi ike n'ụzọ ọ bụla na nhazi nke ụdị ha.
Zute ụdị ndị a na-ewu ewu
Larch bu otu n'ime umu osisi di iche iche nke kachasi. Ọ bụ ezinụlọ nke paini. A na-ahụkarị osisi ahụ n'ọhịa, ugwu, ogige ntụrụndụ. Na mgbakwunye, ọ nwere ike bụrụ akụkụ dị mma nke ihe ndozi nke ubi gị. A na-eji ụdị ọmụmụ a eme ihe ọ bụghị nanị maka ịma mma ya, kamakwa maka ịdịgide, na-eguzogide ọgwụ ọkụ.
Na-etolite na saịtị ahụ: kụrụ osisi ma na-elekọta ubi
Levka bụ ahịhịa ogwu na-esi ísì ụtọ, nke a na-eji ọtụtụ ogige ntụrụndụ na ubi mara ọtụtụ afọ. Osisi ya dị iche iche dị ka nke na-acha odo odo. A levka nwere ike ịbụ otu osisi, osisi abụọ ma ọ bụ okpukpu abụọ, a maara ihe karịrị iri abụọ ụdị levkoy. Cultivation nke leukova site na seedlings. Ya mere, osisi nku aka ekpe bụ ubi mara mma ma ọ bụ ogige ntụrụndụ, a na-ejikarị aka ekpe, bụ nke ọtụtụ ndị na-elekọta ubi maara dị ka mattiola.
Kedu esi eme ka mmiri akọrọ na mba ahụ?
Ogologo oge gara aga, na narị afọ nke iri abụọ, e nwere echiche ọhụrụ, nke a na-ewu ewu na ngwa ngwa na ọtụtụ mba gburugburu ụwa. Ọ bụ ihe gbasara nhazi ihu ala. N'okwu dị mfe, nke a bụ landscaping na landscaping. N'ozuzu, ọ bụ ụdị ihe eji eme ihe owuwu, imebe na iwu.
Esi eji aka gị mee rockeries
Ọ bụghị onye ọ bụla na-anọ n'oge okpomọkụ na-amasị tinker na ubi ma ọ bụ ogige. E nwere ndị nwere ebe ndị dịpụrụ adịpụ, ọtụtụ ndị na-enwekwa mmasị iji oge ha n'efu n'apụta nke okike, ọ bụghị ịzụlite ya, ma na-enwe mmasị na ịma mma dịnụ. Enwere ike ịgwa ha ka ha hazie rockeries, nke a pụkwara ime site na aka ha, ma ọ bụ obodo ha.
Esi eme aka gabions
N'ihe odide nke oge a, usoro na ụzọ dị iche iche na-apụta mgbe niile iji chọọ ụlọ nke okpomọkụ n'oge a. N'oge ahụ, gabions dị ezigbo mma, ndị na-emepụta ihe nkiri na-eji ọ bụghị naanị dị mma, kamakwa dịka ihe mmewere nke nwere nzube bara uru. O nwere ike iyi na ọ bụghị aka ka a ga - esi mee ihe mmemme dị otú a, ebe ọ bụ usoro dị mgbagwoju anya nke chọrọ ịzi ezi na njedebe.
Eji aka aka ha na-ewu isi mmiri na mba ahụ
N'ihi na onye ọ bụla nwe ọdịdị nke dacha ma ọ bụ n'ámá dị oké mkpa. Ndị ọkachamara nwere ike ịhazi ya, ma, ọ bụrụ na achọrọ, ị nwere ike ime nke a n'onwe gị. Isi mmiri ahụ ga-abụ ezigbo mma nke yad ma ọ bụ ihe ubi ahụ. Enwere ike iji aka aka gị wuo ọrụ nke aka gị. Ụdị mmiri iyi dị iche iche maka inye ihe nwere ike ịbụ ụdị dị iche iche.
Ejiji mara mma na okpokoro okpomọkụ ha na aka aka ha, n'ụdị, ihe eji eme ihe
Ntube uzo ala bu oru na usoro a na-eche. Ebe obibi mara mma nke ọma bụ ihe na-atọ ụtọ na arụ ọrụ, na-emepụta ogige dị n'èzí, na-eme ka ebe dị mma, ọ pụkwara ibelata ego nke kpo oku na ụlọ jụrụ oyi. Usoro nhazi nke dacha design, otu n'ime akụkụ kachasị mkpa nke imeziwanye ụlọ, na-elegharakarị anya.
Esi esi wuo ekwú ọkụ na nhazi ihu ala ya
Ka ọ dị ugbu a, a na-achịkọta ihe karịrị iri na abụọ nke ụdị dị iche iche nke ọkụ ọkụ mbụ, nke dị na dacha na-eje ozi dị ka osisi mkpofu, na ebe ọkụ dị mma na ikuku ọhụrụ, na otu ihe dị mkpa n'ịkwado ala ọdịda anyanwụ. Ọtụtụ na-achọ iji aka nke aka ha kwadebe ihe dị otú a nke aka ha site n'enyemaka nke ngwaọrụ ndị dịnụ.